५१ दिनमा जात्रै जात्रा प्रदिप सधै सफल - Glamorous Icon
२० असार २०७६, शुक्रबार १६:५३
Home›Video›५१ दिनमा जात्रै जात्रा प्रदिप सधै सफल
५१ दिनमा जात्रै जात्रा प्रदिप सधै सफल
दशकसम्मको महसंचार संगको अनुभव संगालेर प्रदिप भट्टराई चलचित्र निर्देशनमा होमिए। रविन्द्रसिंह बानियाँले निर्माण गरेको चलचित्र ‘जात्रा’ चलचित्र उनको डेव्यु निर्देशकीय चलचित्र हो। बर्षा राउत र विपिन कार्की मुख्य भूमिकामा थिए। सुस्त सुरुवात गरेको चलचित्रले दुरुस्त अन्त्य गर्दै ५१ दिन मनाउन सफल भएको थियो। समीक्षात्मक हिसाबले पनि चलचित्र राम्रो ठहरिएको थियो। प्रदिपले महसंचारको व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘शत्रुगते’ ले पनि प्रदर्शनको ५१ औ दिन मनाउन सफल भयो।
समीक्षात्मक हिसाबले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको चलचित्र कमर्सियल हिसाबले सफल रह्यो। प्रदीपले जात्राको सिक्वेल ‘जात्रै जात्रा’ हाल प्रदर्शन भैरहेको छ। भोलि चलचित्रले प्रदर्शनको ५१ दिन मनाउदै छ। निर्देशकीय हिसाबले प्रदीपको यो ह्याट्रिक सफलता हो। लगातार उनले निर्देशन गरेका ३ चलचित्रले ५१ औ दिन पार गरेका छन्। लगातार सफल निर्देशन गरिरहेका प्रदिप अहिलेका डिमाण्डेड निर्देशक हुन्। उनि संग काम गर्न जो-कोहि कलाकार लालयित हुन्छन्।
कमेडी च्याम्पियन सुरु हुँदै, विजेतालाई ५० लाख ...
चलचित्र ‘बुलबुल’ बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले ‘स्पेशल ...
Event SegmentGIcon NewsTrip the LightsVideo
VOGUE PROTOCAL Presents “EPIC BAISAKH 1” with Video
E planetFemaleGIcon NewsmovieMusicVideo
‘बुलबुल’को गीत रिलिज शैलीः मल अगाडि नाचिन् स्वस्तिमा
Event SegmentGIcon NewsGIcon NewsTrip the LightsVideo
New Year EVE 2073″Acoustic with subani Moktan
Moods Runway 2017 || Full Video ||Fashion Show
सिटी सेन्टरमा एक महिने ‘वीन्टर फेस्ट’ हुने
यस्तो देखिए सलमान ‘सुल्तान’
Devi wins the Mrs. Global Nepal 2019
देशभक्त सिपाहीको कथा ‘निर्भय’ : निखिल